Bọọlụ nke bọọlụ bọọlụ - Zhejiang Shineway Industry Limited.
Bọọlụ nke bọọlụ bọọlụ na-ebipụ, na-achịkwa, na-ekesa ma na-agbanwe usoro ntụgharị nke ọkara na pipeline. Bọọlụ valvụ ahụ nwere ọtụtụ uru ma bụrụ ụdị valvụ ọhụrụ eji eme ihe. Bọọlụ bọọlụ nwere ọrụ dị iche iche na-enwekarị mpaghara dị iche iche, yabụ ị maara ụdị ụdị oghere valvụ dị?
1. A na-ekekarị akụkụ ndị ahụ ka ọ bụrụ akụkụ dị nro dị nro na oghere akara siri ike.
2. Akụkụ oghere adopts ibe ya bụrụ, mgbatị na ígwè eriri igwe ịgbado ọkụ. Ihe ndi enyere bu: A105, 304, 304L, 316, 316L, LF2, 42CrMo, 1Cr13, F51, Mone1, 17-4PH, wdg.
3. Bọọlụ nwere ike kee ụzọ bọọlụ abụọ, bọọlụ ụzọ atọ, bọọlụ ụzọ anọ, bọọlụ gbagọrọ agbagọ, bọọlụ na-ese n'elu mmiri, bọọlụ edoziri, bọọlụ V, nke dị gburugburu ụwa, bọọlụ shank, bọọlụ siri ike, bọọlụ oghere, wdg. dịka ọrụ si dị. Nwere ike hazie bọọlụ dị iche iche maka ndị ọrụ.
Dị iche iche-akpụ ụzọ nke okirikiri
1. Usoro mgbatị: Nke a bụ usoro nhazi ọdịnala. Ọ chọrọ usoro ịgba agba, ịwụsị yana akụrụngwa ndị ọzọ, yana nnukwu nkuzi yana ọtụtụ ndị ọrụ, itinye ego buru ibu, ọtụtụ usoro, usoro mmepụta dị mgbagwoju anya, na mmetọ Gburugburu ebe obibi na ọkwa nka nke ndị ọrụ na usoro ọ bụla na-emetụta ogo ahụ. nke ngwaahịa. Enweghị ike idozi nsogbu ọnya mmiri n’oghere dị gburugburu. Agbanyeghị, nnyemaka nhazi oghere dị nnukwu ma ihe mkpofu buru ibu. A na-ahụkarị ya na ntụpọ nkedo na-eme ka ọ kpụchaa n'oge nhazi. Ọ bụrụ na ọnụahịa nke ngwaahịa ahụ na-abawanye ma enweghị ike ịkwado ogo ya, usoro a adabaghị maka ụlọ ọrụ anyị.
2. gingzọ usoro: Nke a bụ usoro ọzọ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ valvụ ụlọ na-eji ugbu a. Ọ nwere usoro nhazi abụọ: otu bụ iji nchara nchara belata ma kpoo ọkụ n'ime oghere na-agbanwe agbanwe, wee rụọ ọrụ nhazi. Nke abụọ bụ ịkpụzi okirikiri igwe anaghị agba nchara na nnukwu akwụkwọ akụkọ iji nweta oghere oghere hemispherical, nke a na-agbanye ya n'ime oghere oghere maka nhazi igwe. Usoro a nwere oke ihe eji eme ihe, mana igwe na-arụ ọrụ dị elu, igwe na-ekpo ọkụ na argon na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ chọrọ atụmatụ ego nke yuan 3 nde iji mepụta arụpụta. Usoro a adabaghị maka ụlọ ọrụ anyị.
3. Usoro ntụgharị: spinzọ ntụgharị dị iche iche bụ usoro nhazi dị elu yana obere na enweghị ibe, nke bụ ngalaba ọhụrụ nke nrụgide nrụgide. Ọ na-agwakọta njirimara nke ịkpụzi, extrusion, na-agagharị ma na-agagharị, ma nwee ọnụego iji ihe eji eme ihe (Ruo 80-90%), na-echekwa oge nhazi oge (oge 1-5 nkeji), na ike ihe onwunwe nwere ike okpukpu abụọ na-agbaghari. N'ihi obere kọntaktị mpaghara dị n'etiti wiil na-agbagharị na nke na-arụ ọrụ n'oge ị na-agbagharị, ihe ngwongwo ahụ dị na steeti nrụgide abụọ ma ọ bụ atọ, nke dị mfe nrụrụ. N'okpuru obere ike, nrụgide kọntaktị dị elu dị elu (ruo 25- 35Mpa), ya mere, akụrụngwa dị arọ na ike zuru ezu achọrọ dị obere (ihe na-erughị 1/5 na 1/4 nke pịa). Ugbu a ụlọ ọrụ valvụ nke mba ọzọ ghọtara ya dị ka usoro mmemme teknụzụ na-azọpụta ume, ọ dịkwa mkpa Maka ịhazi akụkụ ndị ọzọ na-agagharị. A na-ejikarị nkà na ụzụ na-atụ egwu eme ihe ma mepụtara na nnukwu ọsọ na mba ọzọ. Teknụzụ na akụrụngwa tozuru oke ma kwụsie ike, yana njikwa njikwa nke mwekota nke igwe, eletriki na hydraulic na-arụ ọrụ.
Ihe nkedo nke valvụ valvụ anyị bụ nke e ji ájá jupụtara na ya, nwere ọdịdị mara mma, ogo nha, na ịkpụzi otu oge.
Bọọlụ Valve Atụmatụ:
ISO5211 Top Flange, Anti Static Devices, Fụọnụ àmà azuokokoosisi, Pressure Balance Oghere Na Ball oghere
Kere ụkpụrụ: API6D, API608, ASME B16.34, DIN 3357, JIS B2001
IHU IHU: ASME B16.10, DIN 3202, EN 558, JIS B2002
FLANGE Njikọ: ASME B16.5, DIN EN 1092-1, JIS B2212, JIS B2214
Inyocha na ule: API598, API6D, DIN 3230, EN 12266, JIS B2003
AHU ỌR:: API 607, ISO 10497
Nkedo anyị niile bụ teknụzụ ájá dị na ya
Molds tool design ----- Ebu ebu n’ichepụta ihe - nrụgide wax ---- mmezi mmezi - - otu osisi ----- shell (dipping) ----- Dewaxing - shell amịkpọ-chemical analysis-agbapụtara-ihicha-okpomọkụ ọgwụgwọ-machining-okokụre ngwaahịa nchekwa。
Dịka ọmụmaatụ, na nkọwa:
Waxpị wax (wax injection Moldsing) --- mmezi wax - nnyocha wax - osisi otu (osisi modul wax) - ịkpụ akpụ (izizi mbụ, ájá, mado, na n'ikpeazụ Ikpocha ikuku shea) - dewaxing (uzuoku dewaxing) - ịmị anụ nke shea - nyocha kemịkalụ --- ịwụnye (ịwụnye nchara a wụrụ awụ na shea ebu) - ịma jijiji - Icha na nkewa nke mgbatị na ịwụnye mkpara --- -Ngwa ọnụ ụzọ ámá --- Nnyocha mbụ (nyocha burr) --- ọgbụgba ọkụ --- machining --- polishing --- nyochachara ngwaahịa --- Warehousing
Nkedo mmepụta usoro bụ Olee ihe enyemaka dị ka nke a. N'ikwu okwu n'ozuzu, enwere ike kewaa ya na wax na ịpị, ịkpụ akpụ, ịwụsa, nhazi na nyocha.
Presspị wax gụnyere (ịpị wax, ịrụzi wax, osisi otu)
Wax ịpị --- Jiri igwe ịpị ihe iji mee ihe ebu
Mmezi waks --- mezie wax wax ebu
Otu osisi --- otu Lamo n'ime osisi
Shell Ndinam gụnyere (nghọta sand, nghọta slurry, ikuku ihicha)
Post-nhazi na-agụnye (mgbazi, ogbugba ọgbụgba ọkụ, ájá ọgbụgba ọkụ, atụtụ,)
Uring wụfu na-agụnye (ịsacha na kemịkal analysis na-akpọ spectroscopy, agbapụtara, shei vibration, ụzọ ámá ọnwụ, na ọnụ ụzọ ọnụ-egweri)
Post-nhazi na-agụnye (ájá ọgbụgba ọkụ, shot ọgbụgba ọkụ, mgbazi, pickling)
Nnyocha na-agụnye (wax wax nnyocha, mbụ nnyocha, márá nnyocha, okokụre ngwaahịa nnyocha)
Ihe nkedo: CF8, CF8M, CF3, CF3M, 4A, 5A, 6A, 904L, Monel, Hastelloy, Aluminom ọla